किन्न Inno Gialuron: एंटी-एजिंग क्रीम | सौन्दर्य समीक्षा
Inno Gialuron: एंटी-एजिंग क्रीम
के हो Inno Gialuron? कसरी सीरमले कार्य गर्दछ र यसले झुर्रीहरूबाट छुटकारा पाउन कसरी मद्दत गर्दछ? प्रभाव, सम्भावित contraindication र प्रयोगको लागि निर्देशन। कहाँ किन्ने बारे जानकारी Inno Gialuron र क्रीमको मूल्य। वास्तविक ग्राहक समीक्षा
तर Inno Gialuron बजारमा एक नवीन औषधि हो जुन छालाको बुढेसकालको देखिने स eliminate्केतहरू हटाउन मद्दत गर्दछ। शक्तिशाली सक्रिय सामग्रीहरू जसले उत्पादन बनाउँदछ एक स्थायी कायाकल्प प्रभाव प्रदान गर्दछ।
कहाँ किन्ने Inno Gialuron
Inno Gialuron एक प्रभावकारी सीरम हो कि फेडि and र बुढेसकाल छालालाई हल गर्दछ। थप रूपमा, एन्टी-एजिंग उपचारले झुर्राहरूको उपस्थिति रोक्छ र मद्दत गर्दछ। फार्मेसीमा खरीद गर्न अझसम्म सम्भव छैन, त्यसैले जालसाजीबाट बच्नको लागि यसलाई विश्वसनीय आधिकारिक आपूर्तिकर्ताबाट मात्र खरीद गर्नुहोस्।
आदेश Inno Gialuron
को विवरण Inno Gialuron
एन्टी-एजिंग सीरममा सक्रिय पदार्थहरूको शक्तिशाली जटिल हुन्छ, जस्तै Hyaluronic र फोलिक एसिड। पूर्वले छालाको गहिरा तहहरूलाई असर गर्दछ, तिनीहरूलाई पोषण प्रदान गर्दै र खुवाइन्छ।
फोलिक एसिड त्यो अंश हो जुन जैव प्रौद्योगिकीले परिमार्जन गरिएको छ। यसले hyaluronic एसिडको प्रभाव बढाउँछ, देखिने शिकनलाई कम गर्दछ र dermis लाई वातावरणको नकारात्मक प्रभावबाट बचाउँछ।
साथै, Inno Gialuron कल्प र फ्यूकसको अर्क सामेल गर्दछ। तिनीहरू polysaccharides मा धनी छन् र छालामा एक antioxidant र शान्त प्रभाव छ।
औषधि 40 मिलीलिटरको ट्यूबहरूमा उपलब्ध छ। एंटी-एजिंगको नियमित प्रयोगको साथ Inno Gialuron सीरम छाला चमकदार र चिल्लो हुन्छ।
को सामग्रीहरू Inno Gialuron, घटक विशेषताहरु
क्रीमको सक्रिय सामग्रीहरू हुन्:
घुलनशील कोलेजेन। यो एक प्राकृतिक कोलेजेन हो जसले सुक्खा, परिपक्व छालालाई पोषण दिन्छ र यसलाई वातावरणको नकारात्मक प्रभावबाट बचाउँछ। कोलेजेनमा ओस कायम राख्ने गुणहरू छन् जसले छालालाई अधिक लोचदार र चिल्लो बनाउन मद्दत गर्दछ। यसले छालाको बायोमेकेनिकल गुणहरू पनि सुधार गर्दछ।
सोडियम hyaluronate (hyaluronic एसिड)। 95% hyaluronic एसिड समावेश गर्दछ, जुन छालाको एक प्राकृतिक घटक हो। मॉइस्चराइजिंग र पुनर्जीवनको प्रभावकारी साधन। एक हाइड्रोफिलिक स्पञ्ज जस्तै, hyaluron ले ओस राख्दछ हजारौं गुणा आफ्नै आणविक वजन। यसले कोषहरूको पुनरुत्थानलाई उत्तेजित गर्दछ, फ्रि रेडिकलहरूसँग लड्छ र छालालाई लोच दिन्छ। छालाको गहिरा तहहरूमा घुसाउँदा, यसले मोसराइज गर्ने प्रभाव बाहिर र भित्र दुबैमा गर्दछ।
पेन्थेनोल। पदार्थ छालामा कार्बोहाइड्रेट-प्रोटीन-फ्याट चयापचयको लागि जिम्मेवार हुन्छ, पूर्ण रूपमा यसलाई गहिराइमा मॉइस्चराइज गर्दछ। झुर्रीहरूको चिल्लो पदार्थको प्रचार गर्दछ, सूक्ष्म क्र्याकहरू, घाउहरू निको पार्छ, कभरको लोच बढाउँछ र नरम बनाउँदछ।
हरियो चिन निकाल्नुहोस्। ठूलो संख्यामा पॉलीफेनोलहरू (एन्टिऑक्सिडन्ट्स) समावेश गर्दछ, जसको छालामा एन्टी-इन्फ्लेमेन्टरी प्रभाव हुन्छ, कोषहरूको सामान्यीकरण सुनिश्चित गर्दछ। ग्रीन चियाको छालालाई फ्रि रेडिकलबाट बचाउन सक्ने क्षमता जसले उमेर बढाउने कारण गर्दछ। भिटामिन ईको भन्दा 20 गुणा बढी छ।
फोलिक एसिडको बायो मोडिफाइड पोलिमरिक रूप। पदार्थले DNA लाई सुरक्षित गर्दछ र कोषहरूको पूर्ण जीवन चक्र कायम राख्न मद्दत गर्दछ। फोलिक एसिडको जैविक परिमार्जन छाला कोषहरूले बढी राम्रोसँग लिन्छ र उनीहरूको तनाव-अस्तित्व दर आधा बढाउँदछ।
Ficus Carica निकासी। यो भिटामिन, माइक्रो र म्याक्रो तत्व र प्रोटीनहरूको सन्तुलित जटिल हो। एक छाला मा एक moisturizing, विरोधी भड़काऊ, सुखदायक प्रभाव छ। सुदृढ बनाउँछ, लोच बढाउँदछ, पुनर्जन्म गर्दछ, सूजन हटाउँछ र बलियो एन्टीसेप्टिक गुणहरू छन्। यो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडन्ट पनि हो।
Fucus Vesiculosus निकासी। नाइट्रोजन, तामा, फलाम, म्याग्नीशियम र मैंगनीजको सामग्रीलाई धन्यबाद, यो निकासीले छालाको टोन पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ। सेलुलर मेटाबोलिज्ममा सकारात्मक प्रभाव छ। छालालाई ओसिलो बनाउँदछ र यसलाई पुन: उत्पन्न गर्दछ।
को उपयोगी गुणहरू Inno Gialuron
इलास्टिन र कोलेजेनले अनुहार र घाँटीमा छालाको लोच प्रदान गर्दछ। जे होस्, उमेरका साथ र बाह्य नकारात्मक कारकहरूको प्रभावमा यी पदार्थहरू थोरै परिमाणमा उत्पादन गर्न थाल्छ। यसले झुर्रीहरूको छाला, छालाको दाग बिगार्ने र स्यागिंगमा जान्छ।
सुख्खा र पीलि the छालाको hyaluronic एसिड को गहिरो तह को अभाव को एक परिणाम हो, जो ओसिलो राख्न सक्षम छ।
कार्य Inno Gialuron क्रीम छालामा hyaluronic एसिड को सक्रिय कार्य हो। यसले अनुहारको सतहमा पातलो फिल्म बनाउँदछ, छालाको ओसको प्राकृतिक स्तरको संरक्षण गर्दै नमी विनिमयलाई अवरोध पार्दैन।
Hyaluronic एसिड, मानव छालाको एक घटक हो, यससँग पूर्ण रूपमा उपयुक्त छ र एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्न सक्षम छैन। थप रूपमा, hyaluron फोलिक एसिड र समुद्री शैवाल अर्क जस्ता क्रीम को जैविक दृष्टिगत सक्रिय अवयव, को दीर्घकालिक कार्य प्रचार गर्दछ।
Inno Gialuron छालामा प्रभाव:
गठनबाट झुर्रीहरू रोक्दछ।
क्रीमको फाइदाजनक प्रभाव बढाउँछ।
एक पेशेवर केयरिंग प्रभाव तपाइँ चिकनी, मॉइश्चराइज्ड छाला दिन्छ।
डर्मिसको लोच बढाउँछ।
म्याटिting प्रभाव छ: छालाको स्वस्थ उपस्थिति छ, बिना चिल्लो चमकको।
यो नोट गरिनु पर्छ एन्टी-एजिंग सीरम एक केंद्रित एजेन्ट हो, र यो केवल निर्देशनहरूमा उल्लेख गरे अनुसार प्रयोग गर्नुपर्दछ। नियमको रूपमा, उत्पादनको केहि बूँदाहरू चाहिएको प्रभाव प्राप्त गर्न पर्याप्त छन्।
को विरोधाभास Inno Gialuron
मानव छालाले अधिक hyaluronic एसिडमा छिटो प्रतिक्रिया गर्दछ, जुन बाह्य स्रोतहरूबाट आउँदछ। त्यसकारण, एक छोटो समय पछि, यो आफ्नै उत्पादनमा बन्द हुन्छ।
बाहिरी उत्पादन रोकिने बित्तिकै, डर्मिस सुस्त हुनेछ र नयाँ झिम्का देखा पर्न सक्छन्। त्यसकारण, छालामा राखिएको hyaluronic एसिड उत्पादनको मात्रा कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
Inno Gialuron hyaluron, फोलिक एसिड र शैवाल अर्कको अधिकतम अनुपात समावेश गर्दछ। यो दैनिक प्रयोगको लागि उपयुक्त छ र एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्न व्यावहारिक रूपमा असक्षम छ।
जे होस्, यो सम्झन लायक छ कि तपाईंसँग विशिष्ट कम्पोनेन्टहरूको व्यक्तिगत असहिष्णुता हुन सक्छ। यदि यो हुन्छ भने, उत्पादन प्रयोग रोक्नु पर्छ।
को अनुप्रयोग भन्दा बढी नगर्नुहोस् Inno Gialuron, निर्माता 1-2 दिनमा एक पटक सिफारिश गर्दछ। अन्यथा, तपाइँ छाला प्रतिक्रिया अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
थप रूपमा, यदि तपाइँ घाउ, घर्षण वा अत्यधिक चक्राउनको रूपमा छालामा घावहरू छन् भने सीरम प्रयोग नगर्नुहोस्। तिनीहरूलाई निको हुन को लागी प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
प्रयोगको लागि निर्देशनहरू Inno Gialuron
झुर्री हटाउन क्रीम लागू गर्न पर्याप्त सरल छ। को लागी निर्देशन Inno Gialuron अनुप्रयोग अन्य hyaluronic एसिड आधारित उत्पादनहरु भन्दा फरक छैन।
कसरी लागू गर्न Inno Gialuron सीरम:
सर्वप्रथम, अनुहार, घाँटी र डेकोलेटको छाला सफा गर्नुहोस्। यो गर्नका लागि, सफ्ट जेल वा फोमले धुनुहोस्, वा तपाईंको छालामा केही टोनिक प्रयोग गर्नुहोस्।
हातको पछाडि नरम प्याटि movements्ग आन्दोलनको साथ अनुहार र घाँटीमा सीरमको थोरै मात्रा लागू गर्नुहोस्।
सबै भन्दा बढि कस्मेटिक क्रीम भन्दा फरक, तपाईं पलक क्षेत्र मा सीरम लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
बिस्तारै छालामा सीरम वितरण गर्नुहोस् पूर्ण रूपमा अवशोषित सम्म।
तपाईं दिनको दुई पटक सीरम लागू गर्न सक्नुहुनेछ - बिहान र साँझ। यो सीरम कोर्सहरू प्रयोग गर्न लायकको छ - करीव दुई महिना, त्यसपछि तपाईंको ब्रेक छ। एकचोटी तपाइँले कसरी प्रयोग गर्ने जान्नु हुन्छ Inno Gialuron, तपाइँ केहि हप्तामा ध्यान देने योग्य प्रभाव प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
का लागि ग्राहक समीक्षा Inno Gialuron
बीथ्रिस, 28 वर्ष पुरानो
मेरो उमेरमा, मँ अझै पनि मेरो अनुहार मा स्पष्ट गहिरो रिink्कहरु र पटहरु छैन, तर मेरो पहिलो "कागको खुट्टा" देखा पर्न थालेको छ। त्यसैले मैले गम्भीर छाला समस्याहरूको लागि पर्खेर र प्रारम्भिक रिink्कलहरू रोक्न निर्णय गरेँ। मैले यसका लागि विज्ञापनहरू देखें Inno Gialuron सीरम इन्टरनेटमा र तुरुन्त चासो लाग्यो, मलाई उत्पादन को रचना मनपर्दा। प्रयोगको पहिलो केही दिन पछि, मैले सकारात्मक प्रभाव पाएँ। त्यसकारण म विश्वस्तताका साथ उत्पादन सिफारिस गर्न सक्छु - यसले वास्तवमै मद्दत गर्दछ!
अन्ना, 39 वर्ष पुरानो
Hyaluronic एसिड उत्पादनहरू सधैं मेरो तखतामा अवस्थित हुन्छन्। म नियमित रूपमा ती छालालाई टोन्ड राख्न प्रयोग गर्दछु। मेरो "संग्रह" मा नयाँ उत्पादन थियो Inno Gialuron सीरम एक किफायती मूल्य मा उत्कृष्ट गुणवत्ता! मलाई अनुप्रयोग पछि मेरो छालाको अवस्था मन पर्छ: यो चिल्लो, मखमल हुन्छ र चिल्लो चमक पूर्ण रूपमा गायब हुन्छ। म महसुस गर्न सक्दछु कि मेरो छालालाई सेलो र उपयोगी पदार्थहरूले पोषण दिएको छ। मलाई लाग्छ मैले मेरो उत्पादन फेला पारेको छु।
Kate, 46 वर्ष पुरानो
मेरी छोरीले मलाई एन्टी-एजिंग सीरम दिए Inno Gialuron। यो प्रयोग गर्नु अघि, मैले अनुहारको छालाको कायाकल्प गर्न कुनै पनि कस्मेटिक प्रक्रियाहरू गरेको छैन। म निश्चित छु कि साधारण झ्यामिक उपचारको साथ मेरो झिम्का निको पार्नु लगभग असम्भव छ। सीरमलाई केहि पटक प्रयोग गरिसकेपछि, म यो निष्कर्षमा पुगेँ कि उत्पाद राम्रो गुण हो - यसले मेरो छाला राम्रोसँग नमीमा राख्यो र यसलाई कोमल बनायो। तर मैले याद गरे कि मेरो अनुहारमा कम झिम्का झुण्डिएका थिए - तिनीहरूले शाब्दिक रूपमा मेरो आँखामा हेरेका थिए। म अब खुसी छु र कस्मेटिक उत्पादनहरु को बारे मा मेरो राय परिवर्तन भएको छ। मेरो सीरम वृद्ध छालाको समस्याहरू समाधान गर्न साँच्चै सक्षम छ!